I-Kik Messenger ye-PC - Landa iWindows 10 - Ungakwenza Kanjani
I-Kik messenger ngokuqinisekile ingenye yezinhlelo zokusebenza zemiyalezo ezaziwa kakhulu. Uma uyibhokisi lokuxoxa futhi uthanda ukuxoxa nabangani bakho, lolu hlelo lokusebenza olungcono kakhulu ongalusebenzisa. Ngamanye amagama, uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi uxhumane nabangani bakho kalula futhi inezici eziningi ezenzelwe ukwenza izingxoxo zithandeke.
Izindlela ezihamba phambili zokulanda i-Kik ye-PC:
Cishe kunezindlela ezimbili zokulanda i-Kik ku-PC yakho:
Usebenzisa i-Android Emulator
Ayikho indlela yokulanda.
Landa i-Kik Messenger Usebenzisa i-Android Emulator:
Yini i-Android Emulator? Isipele se-Android isoftware ekuvumela ukuthi usebenzise noma yiziphi izinhlelo zokusebenza ze-Android kwi-PC yakho. Isoftware iyakwazi ukusebenzisa i-Android OS ebonakalayo yeWindows ne-Mac OS nayo. Ngamazwi alula, i-emulator ye-Android isiza ukudala ukusetha okukuvumela ukuthi ulingise idivayisi ye-Android kwi-PC yakho.
Ama-Emulators amahle kakhulu we-Android we-PC:
Lokhu empeleni kungenye ye-emulators ethandwa kakhulu yi-Android. Inezinguqulo zombili zamawindows nezama-mac. Sizophakamisa kakhulu ukuthi ulande futhi usebenzise ama-Bluestacks njengoba emahhala futhi inesimo esibonakalayo esisebenziseka kalula.
Ngakho-ke, i-Andyroid ikhiphe inguqulo yayo yakamuva muva nje eye yaduma kakhulu. Ukukhuluma iqiniso, abasebenzisi abaningi be-Bluestacks sebeqalile ukusebenzisa i-Andyroid ngoba banezici ezimangazayo.Uhlobo lwamahhala lwe-Andyroid lunakho konke ongakudinga ukusebenzisa i-Kik ngokuvamile kwi-PC kwikhompyutha yakho ye-Windows noma ye-Mac.
Izinyathelo Zokufaka i-Bluestacks YeWindows:
Ngemuva kokuthi ulande ngempumelelo ama-Bluestacks noma amanye ama-emulators, uzodinga ukuyifaka.Landela lezi zinyathelo eziyisisekelo ukufaka i-emulator:
Iya kufolda lapho ulande khona futhi wagcina ifayili le-Bluestacks noma i-emulator.
Ngemuva kwalokho, chofoza kabili kufayela elisebenzisekayo ukuze uqhubeke ngokuqhubekayo.
Linda iwizadi yokufaka ukuthi ikuqondise kwinqubo.
Landela imiyalo ekhonjiswe esikrinini ukuze uqedele inqubo yokufaka.
Lapho usufake i-emulator ye-Android ngempumelelo, isinyathelo esilandelayo ukuyivula.
Lezi yizinyathelo okudingeka uzilandele:
Thola isithonjana se-Bluestacks kudeskithophu yakho bese uqhafaza kuso noma kwesinye isimemezelo osilandile bese uchofoza kusithonjana.
Uma ungakwazi ukuthola isithonjana, chofoza inkinobho yokuqala bese uthayipha i-Bluestacks noma igama le-emulator kubha yokusesha.
Chofoza kunketho efanele ukwethula isoftware
Ungachofoza naku-Start> Zonke Izinhlelo> Bluestacks
I-emulator ekhethiwe izovula futhi isebenze kwi-PC yakho.
Landa i-Kik ku-Windows Usebenzisa ama-Bluestacks:
Emva kwalokho, udinga ukulanda Kik .APK Ifayela.Lapho sekuyisikhathi ukufaka Kik kukhompyutha yakho. Landela lezi zinyathelo eziyisisekelo ukwenza lokho:
Thola ifayela le-Kik .APK kufolda lapho ugcine khona ifayela ngenkathi ulanda i-APK kukhompyutha yakho.
Qhafaza kabili kufayela le-APK bese ulinda kancane.
Ama-Bluestacks noma enye i-emulator izokwethula futhi isebenzise isithunywa se-KIK ngokuzenzakalela.
Qhafaza kwesokudla ku-.APK bese ukhetha ukuvula nge.
Iwindi elisha lizovela esibukweni lapho ungakhetha khona uhlelo ozovula ngalo ifayela.
Khetha igama le-emulator yakho kuzinketho ezitholakalayo.
Emva kwalokho, chofoza KULUNGILE ukufaka i-Kik ku-PC yakho.
Manje usungangena ngemvume ku-Kik bese uqala ukuxoxa nabangani bakho.
Ayikho indlela yokulanda:
Ungakhetha nenketho ethi akukho yokulanda lapho ungadingi ukulanda i-emulator ye-Android.Izinzuzo zendlela yokulanda ayikho yilezi:
Awudingi ukukhathazeka ngesikhala sediski ku-PC yakho ngoba asidingi ukufakwa
Udinga kuphela isiphequluli sewebhu ukusebenzisa i-Kik isithunywa esheshayo
Ungasebenzisa izinhlelo zokusebenza ezingenakubalwa ze-Android kwikhompyutha yakho ngaphandle kokusebenzisa i-emulator.
Kungani Kufanele Sebenzisa Kik for PC?
I-Kik Messenger uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo olumangalisayo noluthandwayo. Uma uthanda ukuxoxa nabangani bakho, khona-ke lokhu kuzoba uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu ongalusebenzisa. Ngamazwi alula, lolu hlelo lokusebenza likuvumela ukuthi uxhumane nabangane bakho kalula, futhi inezici eziningi ezihlukile ezenzelwe ukwenza izingxoxo zithakazelise.
Izici Zokusebenzisa i-Kik ye-PC:
Inesipiliyoni Esiyingqayizivele Sokuxoxa:I-Kik ye-PC wuhlelo lokusebenza olwehluke kakhulu ngendlela eza nohla lwezici ezithile ezimangazayo ezinikeza umuzwa wokuxoxa oyingqayizivele kubasebenzisi bayo.
Ingxoxo yevidiyo nabantu:Lolu hlelo lokusebenza lukuvumela ukuthi wenze amakholi wevidiyo ngaphandle kokulanda ezinye izinhlelo zokusebenza ezifana ne-Skype, WhatsApp, noma i-Facetime. Kuza nokuxoxa ngevidiyo.
Mema Abangani Bakho:Ungamema abangani bakho ukuthi basebenzise lolu hlelo lokusebenza ukuxoxa nabo, ungabamema kalula ngemiyalezo, imithombo yezokuxhumana, noma i-imeyili futhi ubacele ukuthi baxoxe nawe ku-Kik messenger nganoma yisiphi isikhathi.
Izaziso:Noma nini lapho uthumela noma uthola noma yimuphi umlayezo kulolu hlelo lokusebenza, isaziso sizovela esikrinini sakho.
Imilayezo yeMultimedia:Akukhona okwenzelwe imiyalezo kuphela, empeleni ungathumela i-emoji, ama-Gif, izithombe, nemidwebo.
Ikhodi ye-Kik:Bonke abasebenzisi be-Kik banekhodi yabo eyingqayizivele ye-Kik engatholakala kalula kuthebhu yezilungiselelo. Ukuze uskene ikhodi, thepha isithonjana sokusesha, bese uqhafaza kunketho ethi Thola abantu. Bese ukhetha inketho Skena i-Kik Code ukuze uqhubeke.
Isitolo se-Bot:Ngakho-ke, uma ungenamuntu ongakhuluma naye ku-Kik, ungavele uxoxe nobabili be-Kik. Ukukhuluma iqiniso, lesi yisici esihle ozosithola ku-Kik ye-PC. Lesi sici sikuvumela ukuthi uxoxe futhi udlale imidlalo futhi ujabulele futhi ufinyelele kuzo zonke izindaba zakamuva kuhlelo lokusebenza neminye imisebenzi.
Ukuvikelwa Kwangasese:Uma usebenzisa i-Kik, awudingi ukuthi ukhathazeke ngobumfihlo bakho njengoba ungahlala ungaziwa uma uxoxa kwi-PC yakho, futhi izingxoxo ziphephile nawe kuphela.Ungashintsha igama lakho lomsebenzisi futhi usethe ama-akhawunti amasha. It Ubuye isici evumela ukuthi wena ukuvimba oxhumana engadingeki.
Izingxoxo Zeqembu:Ku-Kik Messenger, uzokwazi nokwakha iqembu kuhlelo lokusebenza bese uliqamba njengokukhetha kwakho. Bese ufaka amalungu eqenjini bese uqala ukuxoxa nonke. Futhi ungasesha amaqembu lapho ungathanda ukujoyina futhi ubacele ukuthi bakungeze eqenjini.
Isikhombimsebenzisi Esinomsebenzisi:Lolu hlelo lokusebenza lunokusebenziseka kalula okukuvumela ukuthi usebenzise uhlelo lokusebenza ngaphandle kwesidingo sanoma iluphi uhlobo lokufundisa. Awudingi nokubuza noma ngubani ukuthi usebenzise kanjani uhlelo lokusebenza. Odinga ukukwenza ukulanda nokufaka bese uqala ukuxoxa nabangani bakho.
Ungathola Imilayezo Emidala:Ungabuyisa kalula imilayezo emidala usebenzisa isici sayo somlando kulolu hlelo lokusebenza. Lokhu kuzokusiza ukwazi ukuthola imilayezo yengxoxo ebalulekile ongafuni ukuyilahla.
Izici zokwenza ngokwezifiso:Yebo, kufanele wazi ukuthi lolu hlelo lokusebenza lokuqala olwethule izici zokwenza ngokwezifiso ezivumela abasebenzisi ukuthi benze ngokwezifiso ukubukeka nokuzizwa kohlelo lokusebenza njengokuthanda kwabo.Ungashintsha ikhasi lengxoxo usebenzisa izingqikithi zengxoxo ezinikezwe kuhlelo lokusebenza. Ungasetha futhi ukuncenceza kwesaziso koxhumana nabo abathile.
Kokubili iBluestacks neAndyroid kunemisebenzi emangalisayo. Ungasebenzisa noma iyiphi yalezi emulators ukulanda nokusebenzisa i-Kik Messenger kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ongazithanda ku-PC yakho ngaphandle kwenkinga. Ungakhetha ngisho ne-No Download Method uma ungazizwa uthanda ukusebenzisa i-emulator. Ngakho-ke, kufanelekile ukusho ukuthi womabili amathuluzi asetshenziswa kahle ukukusiza ukuthi usebenzise i-KIK Messenger ye-Windows.
I-Roblox Free Download (2020) - Ungayifaka Kanjani